काठमाडौं। नेकपाभित्रको विवाद बल्झिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रचण्डको जीवनशैलीका बारेमा प्रश्न उठाएका छन्। उनले नेताहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने भन्दै प्रचण्डमाथि आक्रमण गरिरहँदा ओलीले बनाएका तीन दरबारको स्रोत के हो भन्नेबारे भने कसैको पनि चासो गएको देखिँदैन।
आफ्नो प्रतिवेदनको बुँदा नं.–३५ मा प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै ओलीले लेखेका छन् – नियमित र वैध आम्दानीको स्रोत नभए पनि कतिपय नेताहरुको जीवनशैली एकदमै विलासी भएको, कतिपय नेताहरुको वर्ग उत्थान भएको, बसाइउठाइ अपारदर्शी भएको कार्यकर्ता र जनताको टिप्पणी छ। म त यस विषयमा केही नबोलौँला, व्यक्तिगत विषय पनि नबनाउँला। तर दुनियाँको मुख थुन्न सकिन्छ र ? यस विषयमा छलफल गर्न, अनुसन्धान गर्न र सुधारको विशेष अभियान चलाउन म तयार छु। तपाईं यसमा तयार हुनुहुन्छ ?
तर, भाडाको घरमा बसिरहेका प्रचण्डको सम्पत्ति र जीवनशैलीबारे चर्चा गरिरहँदा ओलीको सम्पत्ति र जीवनशैलीबारे उनले सोचेको देखिएको छैन। जबकि ओलीको ओलीले पिउने मिनरल वाटरमा नै लाखौं खर्चिएको तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। उनी र उनको किचेन क्याबिनेटको जीवनशैली दुनियाँले देखिरहेकै छन्। उनीनिकटका नेताहरुले राज्यको अर्बौं रुपैंयाँ कुम्लाउँदा ओली चुप मात्र बसेका छैनन्, अभियुक्तहरुकै प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्।
नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको जीवनशैलीका बारेमा विरोधीहरुले अतिरञ्जित ढंगले प्रचार गर्दै आएका छन्। जतिबेला उनी लाजिम्पाट बस्थे, उनको निवासलाई विरोधीहरुले ‘प्रचण्ड दरबार’ भन्दै प्रचार गर्थे। जबकि अढाइ तलाको सानो घरको प्रचण्डले मासिक एक लाखको आसपास भाडा तिर्दथे। तर, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा उनीमाथि आक्रमण भइरह्यो।
अहिले प्रचण्ड खुमलटार बस्छन्, त्यो पनि उनको घर होइन, भाडाकाे डेरा नै हो। उनका घरभेटीले के काम गर्छन्, त्यो उनको सरोकारको विषय होला। तर, जिम्मेवारीको विषय होइन। काठमाडौंमा भाडामा बस्ने डेरावालाले घरभेटीका गतिविधिको जिम्मा लिन सक्दैनन्। देशको पूर्वप्रधानमन्त्री भएका कारण प्रचण्डको नैतिक दायित्व रहला। तर, यसकै कारण प्रचण्डमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने कुनै कारण छ। अनि, तेह्रथुमको पुर्ख्यौली घरसहित पाँच घर भएका ओलीले डेरामा बस्ने प्रचण्डको जीवनशैली र सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाउनु हाँस्यास्पद हुन्छ नै।
बालकोटस्थित ओली निवास। दुई घरमध्ये तस्वीरमा एउटा घरमात्रै देखिएको छ।
यता ओलीले आफूलाई नेपालका धनाड्य व्यक्तिको सूचिमा दर्ज गरिसकेका छन्। १२ वर्षको उमेरमा तेह्रथुमबाट झापा झरेका ओली अहिले भक्तपुर बालकोट निवासी बनिसकेका छन्। झापामा उनको पैतृक सम्पत्ति मात्र छ। तर, सर्वसाधारणले ओलीको घर भनेर दुइटा घरलाई चिन्ने गर्छन्।
०४४ सालमा जेलबाट रिहा भएपछि केपी ओलीले पृथ्वीनगरस्थित आफ्नो घरमा भन्दा पार्टी गतिविधिका क्रममा नेतारकार्यकर्ताकै घरमा बढी समय बिताए। भूमिगत बेला ओलीलाई दमककी तारादेवी ढकालले सेल्टर दिने गर्थिन्। उनकै घरमा बसेर ०४८ को आम निर्वाचनमा झापा–६ बाट सांसदमा निर्वाचित भएका थिए। ०५१ को मध्यावधि निर्वाचन पनि ओलीले ढकाललगायतकै नेता/कार्यकर्ताको घरमा बसेर लडे। मध्यावधि निर्वाचनमा झापा–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पुनः निर्वाचित भएपछि ओली ०५१ मंसिर १४ मा गठन भएको कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारको गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि दमकमा जमिन किनेर घर बनाएका थिए।
अझै पनि झापा आउँदा उनी उक्त घरमा बास बस्छन्। ०५६, ०६४, ०७० र ०७४ को निर्वाचन त्यही घरमै बास बसेर लडे। तर, प्रधानमन्त्री भएपछि भने ओली दमकस्थित निवास पुगेका छैनन्। दमकस्थित ओली निवासलाई दुई वर्षदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले आलोपालो २४ घण्टा सुरक्षा दिँदै आएका छन्। ओली बुवा र भाइ बसेको हिमाली टोलको घरमा भने जाने गरेका छैनन्।
तेह्रथुमको आठराई–४ इवामा ओलीको पुर्ख्यौली घर छ। ओलीको जन्मघरमा लामो समयदेखि कोही छैनन्। खानेपानीको समस्या र पहाडको दुःख खेप्न नसकेर इवाबाट एक समय बसाइँ जानेको लर्को लागेको थियो। घर कुरेर बसेका तामाङ परिवार पनि त्यही मेसोमा हिँडेपछि रुङेर बस्न गत सातामात्रै ओलीका नातामा भतिजा पर्ने दम्पती आएका छन्। गत वर्ष जन्मदिन मनाउन ओली आफ्नो पुर्ख्यौली घर पुगेका थिए।
यसरी प्रधानमन्त्री ओलीका तेह्रथुमको पुर्ख्यौली घरसमेत हेर्दा पाँच वटा निवास रहेका छन्। तेह्रथुमको घर उनका बाबुले आर्जन गरेको सम्पत्ति भए पनि झापाको दमकमा भएको घर, बेचिएको देखाइएको तर आफैले भोगचलन गर्दै आएको बिर्तामोडको घर र भक्तपुरको बालकोटमा रहेका पाँच/पाँच तले दुईवटा घर हेर्दा ओलीका चार वटा सुविधासम्पन्न घर देखिन्छ।
ओलीले २०५१ र २०७४ मा बुझाएको सम्पत्ति बिबरण
ओली पहिलोपटक २०५१ मा गृहमन्त्रीको रुपमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्दाताका सरकारलाई सम्पत्ति बिवरण बुझाए, जुन समयमा प्रधानमन्त्री थिए, मनमोहन अधिकारी। सरकारको निर्णयअनुसार मंसिर २८ मा सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा छापिएको थियो उनको सम्पत्ति विवरण।
दोस्रो विवरण उनी दोस्रो पटक बहुमतसहित प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिको हो। सरकारले जेठको दोस्रो हप्तामा विवरण मन्त्रिपरिषद्को आधिकारिक वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरे पनि विवरण भरेको पत्रमा बुझाएको मिति छ, फागुन २५ अनि दर्ता मिति छ, चैत २९ । सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा २०५१ को तुलनामा उनी ऋणमुक्त मात्र देखिँदैनन्, सम्पत्ति पनि रामै्र जोडेको प्रस्टै हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि हालसालै सार्वजनिक विवरणअनुसार उनको भक्तपुरको सूर्य विनायक वडा नम्बर २ मा जग्गा मात्रै होइन, घर पनि छ। विवरणअनुसार अहिले उनीसँग २ कित्तामा गरी डेढ रोपनी जग्गा छ अनि तीन तलाको २ वटा घर पनि। ओलीका एल आकारको जग्गाको एकै कम्पाउडभित्र दुवै जग्गा देखिन्छ।
यस बीचमा उनी पहिलो पटक गृहमन्त्री, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री र त्यसपछि लगातार प्रधानमन्त्री हुन सफल भए। २०४६ को राजनीतिक परिर्वतनपछि देशले आर्थिक उन्नतिमा आशा गरेअनुसार छलाङ नमारे पनि आयआर्जनको निश्चित स्रोत नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिसँगै आर्थिक पाटोमा समेत छलाङ मारेको देखियो। राजनीतिबाहेक दोस्रो आम्दानीको स्रोत नहुँदा पनि उनले २४ वर्षमा करोडौंको छलाङ कसरी मारे ? यसबारे खासै अनुसन्धान भएको देखिँदैन।
ओली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हुन्। उनले जीवनमा राजनीतिबाहेक दोस्रो पेशा गरेनन्। सरकारी लाभको पदमा रहँदा प्राप्त सेवा सुविधाले त्यत्रो सम्पत्ति जोर्न सम्भव नै हुँदैन। त्यसमाथि कार्यकर्ताको चाप हुने नेताका लागि त दैनिक खर्चका लागि तलवभत्ता नै अपुग हुन्छ। तर, ओलीको सम्पत्तिबारे खास चर्चा भएको देखिँदैन।
ओलीको तेह्रथुममा रहेको पुर्ख्यौली घर